Kunyangwe nekusvika kweFace ID pa iPhone, Apple haina kukanda mapfumo pasi Bata ID uye bhatani repamba pa iPhone - shure kwezvose, Apple yakanamatira pairi pane ichangoburwa 2022 iPhone SE, pamwe neiyo 2020 iPhone SE.
Tine izvozvo mupfungwa, pano tiri kuunza akanakisa Bata ID iPhone matipi uye mateki anosanganisira azvino uye ekare iPhone SE modhi, pamwe neiyo iPhone 6 uye 6 Plus, 6S uye 6S Plus, iPhone 7 uye 7 Plus, uye iyo iPhone. 8 uye 8 Plus.
iPhone general matipi uye matipi
Bvisa True Tone kuratidza: Kuti uwane iyo skrini ye iPhone kuti igadzirise otomatiki chiyero cheruvara uye tembiricha kuti ienderane nemwenje wemukati mukamuri, tungamira kuKudzora Center nekupuruzira kumusoro kubva pasi pechiratidziro uye manikidza kudzvanya kupenya kutsvedza. Zvino dzvanya bhatani reToni Yechokwadi. Iwe unogona zvakare kuenda kuSettings> Ratidza uye Kupenya uye shandura iyo “True Tone” switch.
Chii chinonzi Apple Chaiyo Toni Kuratidzira?
Batidza rima mode: Kuti ubatidze rima modhi, vhura Zvirongwa> Ratidza uye Kupenya> Teka iyo Rima Mode sarudzo kumusoro. Kana iwe ukadzvanya pane sarudzo pazasi, unogona kuseta hurongwa hwepaunoda rima modhi yekubatidza kana kudzima.
Chaja zvisina waya: Kuti ushandise iyo iPhone's isina waya yekuchaja masimba (iPhone 8 kana gare gare), unozofanirwa kutenga isina waya charger. Chero Qi charger ichashanda, asi kuti uchajise zvinobudirira unoda imwe yakagadziridzwa Apple's 7.5W kuchaja (nyowani MagSafe iPhone majaja anogona kuchaja pa15W).
Yakanakisa isina waya machaja e iPhone
Gonesa 60fps 4K kurekodha vhidhiyo: Musoro kune Zvirongwa> Kamera> Rekodha Vhidhiyo uye wobva wasarudza iyo 4K pa60fps sarudzo yekupfura nepamusoro-soro resolution uye furemu-chiyero inogoneka pa iPhone.
Pfura 1080p inononoka-kufamba pa240fps: Zvakafanana neyekupedzisira, tungamira kuZvirongwa> Kamera wobva wadzvanya "Rekodha Slow-mo" uye sarudza yakanyanya kumhanya sarudzo. Iye zvino unogona kupfura 240fps inononoka-inofamba vhidhiyo paFull HD.
Portrait Lighting effects: Kuti upfure mapfuti ePortrait Mode ane magetsi ekugadzira, tanga waenda kupfura muPortrait mode. Unogona kuita izvi nekumanikidza-kudzvanya chiratidzo chekamera uye kusarudza iyo 'Tora Mufananidzo' nzira yekudimbudzira, kana kuvhura iyo kamera app uye kusarudza iyo Portrait sarudzo imomo. Iye zvino unogona kungobaya nekubata pasi pefuremu painoti 'Natural Chiedza', uye wopfuura nemasarudzo.
Rongedza Portrait Lighting mhedzisiro mushure mekupfura: Vhura chero Portrait yakapfurwa muMapikicha wobva wadzvanya 'Edit'. Mushure mesekondi kana maviri iwe uchaona iyo yekuvhenekesa mhedzisiro icon pazasi pemufananidzo, ibate uye swipe sezvawakaita pakupfura mufananidzo.
Chii chinonzi Apple's Portrait Lighting uye chinoshanda sei pa iPhone?
Ichajise nekukurumidza: Kana iwe uine 29W, 61W kana 87W USB Type-C simba adapta yeMacBook, unogona kubaya yako iPhone 8 kana 8 Plus, iPhone SE 2020 kana iPhone SE (2022) uchishandisa Type-C kune Mheni tambo woiona. kuchaja nokukurumidza chaizvo. Kusvika 50 muzana mumaminetsi makumi matatu.
Seta kupenya kwescreen: Pamwe uunze Kudzora Center uye gadzirisa inotsvedza inopenya inotsvedza, kana enda kune Zvirongwa> Ratidza & Kupenya> Gadzirisa Kupenya kutsvedza.
Saizi Yemavara uye Mavara Akasimba: Kuti uchinje saizi yemavara ekutanga uye kana iwe uchida kuti mafonti ese ave akashinga kuti zvive nyore kuverenga enda kuSettings> Display & Brightness> Bold Text.
10-mazuva ekufanotaura kwemamiriro ekunze: Enda kune mamiriro ekunze, uye pane chero guta tsvaira kumusoro. Iwe zvino unosvika pakuona fungidziro yemazuva gumi pamwe nerumwe ruzivo senge mini mamiriro ekunze ezuva, kubuda kwezuva nekuvira kwezuva uye mukana wekunaya kwemvura.
Sarudza mufananidzo mutsva: Kuti usarudze Wallpaper nyowani, enda kuSettings> Wallpaper> Sarudza Itsva Wallpaper.
Svika kune zvigadziriso zveWi-Fi nekukurumidza ne3D Touch kana Haptic Touch: Kana iwe uine iPhone 6S, 6S Plus kana gare gare, unogona kumanikidza kudzvanya pane Settings icon kuratidza nekukurumidza zvinongedzo kuBluetooth, Wi-Fi, uye Battery marongero. Iko kufamba kunoita kuti ikurumidze kusvetukira kumasetirwo asina waya.
Dzima mapikicha ekuonana: Unogona kushandura kana kudzima mapikicha ekubata pa iPhone 6 uye gare gare. Kuti uchinje marongero, anobatidzwa nekusarudzika, enda kuZvirongwa> Mharidzo> Ratidza Mapikicha.
Dzokera kumaapps: Paunovhura chinongedzo kana kudzvanya chiziviso uchishandisa app, iwe unounzwa kune itsva app kuitira kuti uone ruzivo rwakazara. Iwe zvakare uchaona bhatani re'Kudzokera ku…' kumusoro kuruboshwe kweiyo ichangobva kuvhurwa app, ichikupa iwe mukana wekuibaya uye nekukasira dzokera kuapp yawanga uchishandisa.
Tarisa hutano hwako hwekubereka: Iyo Hutano app ine Reproductive Health tab, ine sarudzo dzebasal tembiricha yemuviri, cervical mucus mhando, kumwedzi uye ovulation, nezvimwe.
Delete alarm Apple's swipe-to-delete gesture inoshanda muClock app. Kuti udzime alarm, swipe kuruboshwe pane alarm.
Tsvaga muZvirongwa: Iyo Settings app ine nzvimbo yekutsvaga kumusoro iyo inogona kuratidzwa nekukwevera pasi paSettings menyu. Ishandise kuwana maswichi aunoda.
Gonesa Low-Power Mode: Iyo Yakaderera Power Mode (Settings> Bhatiri) inoita kuti uderedze mashandisiro emagetsi. Iyo ficha inodzima kana kudzikisa kumashure kweapp kuzorodza, kurodha otomatiki, kutora tsamba, nezvimwe (kana zvagoneswa). Unogona kuibatidza chero nguva, kana kuti unokurudzirwa kuibatidza pa20 uye 10 per cent zviziviso mamaka. Iwe unogona zvakare kuwedzera chekudzora kuKudzora Center, uye kuiwana nekukurumidza nekutsvaira kumusoro kuti uwane Kudzora Center uye nekudzvanya pane bhatiri icon.
Tsvaga bhatiri guzzling apps: iOS inokuudza zvakananga kuti ndeapi mapurogiramu ari kushandisa yakanyanya muto. Enda kuZvirongwa> Bhatiri uye wobva wakanda pasi kune chikamu chinokupa kutarisa kwakadzama kune ako ese mabhatiri-guzzling maapplication.
Shandisa nhamba-nhanhatu passcode: Apple yagara ichikupa mukana wekuseta madhijiti mana, asi inopawo nhamba-nhanhatu sarudzo, zvichireva kuti matsotsi ane mukana mumiriyoni imwe chete wekupaza, pane 1 mugumi. Enda kune Zvirongwa> Bata ID & Passcode> Shandura Passcode, uye wobva wasarudza "Passcode Options".
Chinja kuti skrini yako inopindura sei kune matepi: Chikamu chiri pasi peKuwanika muZvirongwa chinoita kuti uchinje mapinduriro anoita skrini yako kumapombi. Iwe unogona kuudza iPhone yako kuti irege kufuratira inodzokororwa kubata. Iwe unogona zvakare kuwedzera nguva yematepi isati yazivikanwa, uye nezvimwe zvakawanda.
Tarisa bhatiri rako kuburikidza neBattery widget: Mukati memajeti anowanikwa ne swipe kubva kuruboshwe kuenda kurudyi kubva paChidzitiro cheKumba uye kukiya skrini, pane kadhi rinokutendera kuti uone hupenyu hwebhatiri hwasara mu iPhone yako, Apple Watch uye W1 kana H1 chip-yakashongedzerwa mahedhifoni. Kana iwe usingade iyi widget, tora bhatani rekugadzirisa pazasi pechidzitiro uye wobva wadzvanya bhatani rekudzima.
iPhone Control Center mazano
Wedzera zvidzoreso zvitsva: Zvinogoneka kuwedzera uye kubvisa zvidzoreso kubva Kudzora Center. Musoro kune Zvirongwa> Kudzora Center uye wobva wasarudza kuti ndeapi madhiraivha aungade kuwedzera.
Ronga patsva zvidzoro: Kuti uchinje marongero eaya ma control awakawedzera, dzvanya uye ubate iyo matatu-bar menyu kurudyi rwechero control yaungade kufambisa, wobva waikwidza kumusoro nekudzika rondedzero kuenda kwaunoda kuti ive. .
Wedzera zvidzoreso: Mamwe madhiraivha anogona kuita chidzitiro chakazara, ingomanikidza kudzvanya (kureva kuti dzvanya zvakanyanya pazviratidziro zvinoenderana) pane control yaunoda kuwedzera uye inozadza skrini.
Batidza hotspot yako pachako: Nekumisikidza, iyo yekubatanidza kutonga ine ina chete sarudzo mairi. Kana iwe ukamanikidza kudzvanya kuti uwedzere, iwe unowana yakazara-screen control ine mbiri dzimwe sarudzo. Tinya pane yako hotspot icon kuti ibatike.
Batidza Night Shift: Kubatidza paNight Shift - iyo inouraya mwenje webhuruu, ichiita kuti chidziyere chidzitiro - manikidza kudzvanya kupenya kupenya, wobva wadzvanya chiratidzo cheNight Shift pazasi pechidzitiro.
Shandisa skrini kurekodha: Imwe yesarudzo dzaunogona kuwedzera kuKudzora Center ndeye Screen Recording. Ita shuwa kuti unowedzera kutonga, wobva wavhura Kudzora Center uye wodzvanya iyo icon inoita senge denderedzwa chena mukati memhete chena. Kubva zvino zvichienda mberi icharekodha zvese zvinoitika pachiratidziro chako. Dzvanya kutonga zvakare kana wapedza, uye inochengetedza vhidhiyo kune yako Photos app otomatiki.
Gadzirisa tochi/kupenya kwetochi: Unogona kushandura kamera yako flash, uchiishandisa semwenje, nekuvhura Control Center uye nekudzvanya pane torch icon. Kana iwe uchida kugadzirisa kupenya, manikidza kudzvanya iyo icon, wobva wagadzirisa yakazara-skrini inotsvedza inoonekwa.
Kurumidza chinja panoridzwa odhiyo: Chimwe chinotonhorera kugona kushandura panorira mimhanzi. Mumhanzi uchirira, pfuura Apple Music, Spotify, kana kupi zvako, tora diki icon iri pakona yepamusoro yekudzora mimhanzi. Izvi zvinounza pop-up inoratidza zviripo zvishandiso zvaunogona kutamba nazvo. Izvi zvinogona kubatana nenzeve, Apple TV, iPhone yako kana chero AirPlay mudziyo.
Seta inokurumidza nguva: Panzvimbo pekunanga kune iyo timer app, unogona kumanikidza kudzvanya pane iyo timer icon muKudzora Center, wobva watsveta kumusoro kana pasi pane yakazara-skrini kuseta timer chero kubva paminiti imwe kusvika maawa maviri kureba.
Maitiro ekuwana HomeKit zvishandiso: Swipe kubva pasi pechidzitiro kumusoro kuratidza Kudzora Center uye wobva wadzvanya pane diki icon inoita kunge imba.
Seta Focus: Iwe unogona kuseta Focus kuti urege kuvhiringwa nemamwe maapplication kana zviziviso paunenge uchishanda, wakarara kana kutora imwe nguva yako pachako. Swipe kumusoro kubva pasi pechidzitiro chako uye tinya pane Focus tile kuseta uye kugadzirisa Focus.
Chii chinonzi Apple Focus uye chinoshanda sei?
iPhone Lock Screen mazano
Enda kune zviziviso zvekare: Pane yako yekukiya skrini, semazuva ese, zvitsva zviziviso zvinobuda seyakajairwa. Nekudaro, kana iwe uchida kukurumidza kusvika kune vakuru vawakaverenga, asi wakafuratirwa, swipe kumusoro kukiyi skrini uye icharatidza zviziviso zvekare izvo zvisati zvacheneswa.
Bvisa zviziviso zvekare: Nezviziviso zvekare pachiratidziri, manikidza kudzvanya diki 'x' mukona uye tinya iyo 'bvisa zvese zviziviso' zvinobuda zvinobuda.
Vhura iPhone yako pasina kudzvanya bhatani repamba: Nekumisikidza paKubata ID inogonesa iPhone uye iPads, unofanirwa kudzvanya bhatani reKumba kuti usvike kuChiratidziro chekumba. Unogona kushandura izvi nekuenda kuZvirongwa> Kuwanika> Bhatani Repamba> wobva wabatidza pa'Zorora Finger kuti Uvhure'. Zvino iwe hauchafanirwe kudzvanya bhatani zvakare.
Simudza foni yako kuti umuke: Ingo simudza foni kubva kune imwe nzvimbo uye ichamuka ichikuratidza zvese zviziviso zvaunazvo paKiya skrini. Kuti ubatidze kana kudzima chimiro ichi enda ku Zvirongwa> Ratidza & Kupenya> Simudza kuti Wake.
Maitiro ekukurumidza kuwana kamera kubva kukiyi skrini: Simple. Chero kupi paKiya skrini tsvaira kubva kurudyi kuenda kuruboshwe
Maitiro ekuwana majeti paKiya Screen: Zvakare zvakareruka chaizvo. Chero kupi paKiya skrini tsvaira kubva kuruboshwe kuenda kurudyi.
Maitiro ekuvhura foni yako asi gara paKiya skrini: Imwe inoda kuziva, asi Bata ID vashandisi vanogona kuvhura iPhone yavo vasina kuenda kuChiratidziro cheKumba. Kuti uite kudaro isa chigunwe chako pabhatani reKumba asi usadzvanye pairi. Iyo diki padlock icon kumusoro kwechidzitiro ichanyangarika, asi iwe hauzoendirwe kune yako maapplication Kumba skrini.
Maitiro ekuwedzera / kubvisa majeti: Swipe kubva kuruboshwe kuenda kurudyi paKiya skrini inoratidza majeti kubva kune chero maapplication anovatsigira. Kuwedzera, kubvisa kana kuronga patsva, swipe kuruboshwe kuenda kurudyi paKiya skrini uye wobva wafamba uchienda pasi. Tinya bhatani rekugadzirisa kuti ugadzirise kuti ndeapi majeti anoratidza uye nehurongwa hwei.
Kurumidza Pindura: Kana chiziviso chauya - zvichienderana nekuti chakagoneswa nemugadziri - unogona kupindura nekukasira pasina kuvhura iyo chaiyo app. Kuti uite izvi, dhonza pasi chiziviso kuratidza zviito zvaunogona kutora. Kana, kubva kuLock Screen, unogona kumanikidza kudzvanya kana kudzvanya uye kubata chiziviso uye kubaya 'pindura', wobva watanga kutaipa.
Bvisa zviziviso zvemunhu kubva kuKiya Screen: Unogona kudzima chiziviso chemunhu kubva kuapp nekungotsvaira kubva kurudyi kuenda kuruboshwe wobva wadzvanya 'clear'.
iPhone Home Screen mazano
Maitiro ekubvisa stock apps: Unogona kubvisa mamwe eApple stock apps seStock, Compass nevamwe. Kuti uite kudaro, ingobaya uye ubate pane iyo app icon kusvika yatanga kuzungunuka wobva wadzvanya iyo 'x'. Iwe unozokumbirwa kusimbisa sarudzo yako. Kuti uvadzosere, ingo tsvaga iyo app iri mubvunzo muApp Store.
Goho uye markup skrini: Tora skrini nekudzvanya Bhatani reKumba uye bhatani remagetsi panguva imwe chete, ipapo diki rekuona skrini rinoonekwa pakona yekuruboshwe. Tinya wobva washandisa maturusi anoratidzwa kudhirowa, kunyora pamusoro, kana kudzvanya mufananidzo.
Ramba chitarisiko chepikicha: Kuti uwane iyo diki skrini yekutarisa kubva pachiratidziro chako, ingo swipe iyo kuruboshwe. Hey presto! Zvaenda.
Maitiro ekutora skrini paApple iPhone SE (2022)
iPhone Messages mazano
Tine a yakazara paMharidzo matipi uye mateki, asi heano mashoma akakodzera kucherechedzwa.
Maitiro ekuwedzera maitiro kune iMessages: Kuti uwane mhedzisiro, dzvanya uye bata chiratidzo chekutumira mushure mekunge wanyora meseji. Pano iwe unogona kushandura pakati peBubble uye Screen mhedzisiro kuti uzviise kune yako meseji.
Maitiro ekunyararidza nhaurirano chaidzo: Mubhokisi rako reMharidzo inbox, swipe kuruboshwe pane chero hurukuro yaunoda kuvanza zviziviso kubva ipapo tora iyo bhero icon. Zvinonyanya kubatsira kana iwe uri chikamu che meseji inoshingirira uye yekutaura yeboka.
Unogonawo kudzvanya chimiro chemunhu wacho pamusoro pehurukuro, wobva watsikitsira pasi uye wobatidza pabhatani reViga Alerts. Izvi zvinoshanda kuSMS pamwe neMessages.
Tumira mufananidzo kune mumwe munhu: Kuruboshwe kwendima yekupinza mameseji muMharidzo iwe uchaona diki kamera icon. Tinya, wobva waita sarudzo yekutora pikicha kana kuti unogona kudzvanya pane iyo gallery icon kumusoro kuruboshwe rwechidzitiro kuti ufambe nemifananidzo ichangobva kupfurwa. Kuruboshwe kune mapfupi kune Kamera app kana yako Photo Library.
Maitiro ekumaka mufananidzo muMessage: Unogona Makaka kana kukurumidza kugadzirisa mafoto usati waatumira muIOS. Kuti uite kudaro, sarudza mufananidzo uye uwedzere kune yako meseji. Usati watumira, tinya pamufananidzo uye iwe unowana sarudzo kuMarkup (kureva dhirowa pairi) kana kuigadzirisa.
Dhirowa uye kutumira mumwe munhu mufananidzo: MuMharidzo iwe unogona zvakare kutumira vanhu mifananidzo yakadhirowewa senge Apple Watch vashandisi vanogona. Tinya iyo diki yeApp Store icon kuruboshwe rwenzvimbo yekupinza meseji uye tireyi yeapp ichaonekwa pazasi. Tsvaga iyo diki yemoyo logo ine zvigunwe zviviri pairi pazasi, ibate uye wobva watanga kudhirowa. Kuita kuti canvas nhema ive yakakura dzvanya pamuseve mudiki uri pamusoro pecanvas nhema.
Maitiro ekudhirowa pavhidhiyo yaunoda kutumira mumwe munhu mune meseji: Tevedza mirairo iri pamusoro, asi pachinzvimbo chekudhirowa pacanvas ipapo dzvanya vhidhiyo kamera icon. Unogona kurekodha meseji uye kudhirowa pairi panguva imwe chete.
Nzira yekutumira munhu kutsvoda: MuMharidzo haugone kungotumira mumwe munhu dhirowa kana vhidhiyo, asiwo akateedzana maumbirwo kana mapatani, kusanganisira kutsvoda pachiratidziri. Kuti utumire kutsvoda, enda kune dema canvas (ona pamusoro) uye tora neminwe miviri kwaunoda kuti kutsvoda kuoneke. Pane zvimwe zvinhu zvakaita sezvigunwe zviviri zvakabatwa pachiratidziri zvinokupa mwoyo unorova, asi zvigunwe zviviri zvakatsvetwa pasi skrini inotyora moyo iwoyo. Pane zvakawanda zvekuedza, saka enda kuyedza.
Nzira yekuwana sei mapurogiramu muMessage: Mune chero hurukuro yeMharidzo iwe uchaona ako ese eMessage maapplication ari mubhara rekushandisa pazasi pechidzitiro. Swipe kuruboshwe kana kurudyi kuti uwane app yauri kutsvaga. Kana iwe uchinyora, iwe unowana diki "A" App Store icon kuruboshwe rwenzvimbo yemavara. Tinya pairi kuti uunze mapurogiramu kumusoro.
iMessage apps: Ndeipi yaunofanira kudhawunirodha kutanga uye maitiro ekuiisa?
Maitiro ekuita kune meseji: Tinya kaviri pane chero meseji yaunogamuchira, uye iwe unozoratidza sarudzo yemifananidzo inosanganisira moyo, zvigunwe kumusoro, zvigunwe pasi, Ha Ha, !!, uye ?. Kudzvanya imwe kuchawedzera kune meseji kuti mumwe munhu ari paIOS aone. Kuidzvanya zvakare kunobvisa kuita.
Maitiro ekupindura kune chaiyo meseji: Zvakafanana nepamusoro, tinya kaviri pane chero meseji yemunhu yaunoda kupindura uye dzvanya pakanzi 'pindura'. Meseji yauri kupindura inozoonekwa pamusoro pemeseji yaunonyora.
Maitiro ekugovera chinyorwa kana vhidhiyo yeYouTube: Mameseji anokupa imwe inoyevedza yekugovera sarudzo, nemamwe mazwi, kubatika chinongedzo mumeseji kunochiwedzera kuitira kuti anogamuchira aone zvaari kuwana. Kana iri vhidhiyo yeYouTube vanozokwanisa kuiona ipapo muMharidzo.
Nzira yekugovera nzvimbo yako: Iwe unogona kukurumidza kugovera yako nzvimbo mukati memeseji nekuenda kune chero hurukuro kana meseji tambo. Tinya zita remunhu wacho kumusoro uye wobva wadzvanya pa 'Goverana Nzvimbo Yangu' kana 'Tumira Nzvimbo Yangu Yazvino'.
Ungabatidza sei Send Read Receipts: Une sarudzo yekugadzirisa Send Read Receipts wega. Kuti uzvigadzirise kuvanhu vakasiyana enda kunhaurirano yeMharidzo, dzvanya zita remudhumeni kumusoro. Kubva pano unokwanisa kudzika pasi kuti ubate kana kudzima sarudzo ye'Send Read Receipt'.
Nguvai?: Wona kuti meseji yakatumirwa nguvai nekukweva kubva kurudyi kuenda kuruboshwe pachiratidziro chehurukuro.
Quick Voice message: Kana ukadzvanya pane diki mic bhatani kurudyi kwebhokisi remavara unogona kutanga kurekodha meseji yemuromo. Simudza chigunwe chako kuti umire uye uratidze bhatani rekutamba. Kana uchinge wafara, swipe kumusoro kana kubaya museve kuti utumire, kana swipe kuruboshwe kana kubaya bhatani re'x' kuti ukanzure.
Ona zvakanamirwa: Enda mune shinda yemeseji / nhaurirano wobva wadzvanya zita remudhumeni kumusoro. Skroka kusvika wasvika pazasi pechidzitiro uye uchaona chero zvakanamirwa/mifananidzo yawakagovanisa nemunhu iyeye.
Ona zvinongedzo uye mapikicha muMapurogiramu Akagoverwa neni zvikamu: Mimwe midhiya, senge mafoto, mimhanzi, zvinongedzo uye zvirongwa zveTV zvakagovaniswa nevanhu zvinozoonekwa mumapurogiramu akateedzana muchikamu chakagoverwa Neni kana iwe ukashandura pane iyo sarudzo. Vhura tambo yemeseji, dzvanya zita remunhu kumusoro kwechidzitiro uye wobva wadzika pasi kuti ubate pa'Shared with Me'.
Chii Apple Yakagovaniswa Newe uye inoshanda sei mumaapps?
Dzima mameseji Swipe kubva kurudyi kuenda kuruboshwe muMharidzo hub uye wobva wabaya bhini icon kuti udzime tambo yemeseji.
Dzima mameseji ega ega: Vhura tambo yemeseji wodzvanya uye ubate meseji yaunoda kudzima. Iwe unozofanirwa kudzvanya pane 'Zvimwe'. Izvi zvinokutendera kuti usarudze mameseji ega aunoda kudzima. Paunenge waita sarudzo yako, rova ​​​​iyo bin icon mukona yepasi kuruboshwe.
Dzima mameseji ekare otomatiki: Zvirongwa> Mameseji uye wobva wakanda pasi kune iyo Message Nhoroondo chikamu. Tinya pane Chengeta Mharidzo sarudzo uye sarudza pakati Nokusingaperi, 1 Gore, kana 30 Mazuva.
Dzima otomatiki mameseji ekuteerera kana vhidhiyo: Nekumisikidza, Apple inoiisa zvekuti kana wangotumira odhiyo meseji inodzima kubva ku iPhone kana iPad yako mushure memaminitsi maviri. Kana iwe uchida kuchengetedza meseji enda kuZvirongwa> Mharidzo uye skira pasi kune iyo Audio Messages chikamu. Tinya pakapera uye wozosarudza pakati pemaminitsi maviri kana Usambofa.
Simuka kuti uteerere mameseji ekuteerera: Yakabatidzwa neyakagadzika, asi unogona kudzima kugona kuteerera uye kupindura mameseji anouya ekuteerera nekusimudza foni yako. Kuti uidzima enda ku Zvirongwa> Mharidzo uye toggle Raise to Teerera.
Bhuruu vs girini: Mabhuru eBlue ndeeMessages, girinhi ndeyemazuva ese echinyakare mameseji eSMS.
Tumira iMessage seSMS: Kana iwe uchinetseka kutumira yako iMessages (pamusoro pedata), unogona kusarudza kudzokera pakutumira meseji seSMS pachinzvimbo. Enda kuZvirongwa> Mameseji uye wobva wakanda pasi kuti Tumira seSMS. Batidza izvi uye mavara anotumirwa pachinzvimbo cheMessage kana iMessage isipo.
iPhone Mapikicha uye Kamera matipi
Tine chimiro chakazara pa Mifananidzo mazano uye mazano, asi hezvino zvishoma zvakakodzera kufunga nezvazvo.
Chinja Live Photo mhedzisiro: Iwe unogona kuchinja kubva kune yakasarudzika Live Photo maitiro. Enda kune yako Mapikicha app, vhura Live Mufananidzo uye tinya iyo Live tag pakona yekuruboshwe yemufananidzo kuratidza matatu akasiyana maitiro: Loop, Bounce uye Long Exposure.
Chengetedza iyo yepakutanga foto uchishandisa Live Photo mhedzisiro: Kana ukangosarudza imwe yeimwe Live Photo mhedzisiro, inoichengeta pafoni yako sevhidhiyo, kwete foto. Kana iwe uchida kuchengeta iyo yekutanga pfuti seyachiri mufananidzo zvakare, ingo rova ​​​​icon yekugovera pazasi kuruboshwe uye tinya 'duplicate' uye chengetedza imwe kopi yepakutanga foto. (Unozofanirwa kuita izvi usati wachinja Live Photo maitiro - kana kungodzokera kune yekutanga Live Photo style wobva wazviita ipapo).
Maitiro ekuisa sefa kune Live Mufananidzo: Iwe unogona kuisa mafirita kune Live Mapikicha uye uchiri kuchengeta iwo seRarama Photo. Kuisa sefa, enda kumufananidzo uri mubvunzo, tinya 'edit' uye tinya madenderedzwa matatu pazasi pechidzitiro chako. Iwe unogona ipapo kusarudza sefa yaunoda.
Maitiro ekukurumidza kuvhura akasiyana kamera modes: Dzvanya zvakasimba pane kamera app uye iwe uchawana sarudzo shoma, kusanganisira Tora Mufananidzo, Rekodha Vhidhiyo uye pane mamwe mamodheru se iPhone SE (2022), 'Tora Chimiro' pachinzvimbo cheyakajairika foto sarudzo.
Maitiro ekubatanidza vanhu muMapikicha app: Apple Photos inogona kuona vanhu nenzvimbo. Kana iwe ukaona kuti app yasarudza munhu mumwechete asi ichiti ivo vanhu vakasiyana unogona kubatanidza maalbum pamwechete. Kuti uite izvi, enda kuMapikicha app> Albums uye sarudza Vanhu. Tinya pa'Sarudza' kumusoro kurudyi kwechidzitiro wobva wasarudza mifananidzo yevanhu vaunoda kubatanidza.
Bvisa vanhu muMapikicha app: Enda kuMapikicha App> Albums> Sarudza Vanhu. Kuti ubvise munhu, tora pa 'Sarudza' uye wobva wadzvanya pane vanhu vausingadi kuona usati wabaya 'Bvisa' muzasi kuruboshwe kwe iPhone yako skrini.
Nzira yekugovera bhaisikopo reMemories: Iyo Apple Photos app inongogadzira mini slideshow yako iyo inogona kugovaniswa sevhidhiyo. Enda kuMemory yaunoda kugovera - unogona kuvawana mu For You tab, tora pamufananidzo mukuru wezita kuti utambe ndangariro. Kana ichirira, sarudza chiratidzo chekugovana chiri pamusoro pechidzitiro chako.
Nzira yekugadzira Memory Mix: Iwe unogona kusarudza iyo yakasarudzika bhaisikopo dhizaini kubva kuApple kana kuishandura kuti ikwane mashoma ezvitaera zvakasiyana. Musoro kuMemory yaunoda kugadzirisa, tora pamufananidzo mukuru kuti utambe vhidhiyo, wobva wadzvanya vhidhiyo yacho zvakare kana iri kutamba. Iwe zvino uchaona chinyorwa chemimhanzi pakona yezasi kuruboshwe iyo inokutendera iwe kutamba uchitenderedza nerwiyo sarudzo uye kugadzira musanganiswa.
Kugadzirisa mafoto: Tsvaga mufananidzo waunoda uye tinya 'edit' mukona yepamusoro. Pano iwe unogona kudzvanya pane wand pazasi kuti uwedzere otomatiki foto yako kana kutsvedza kubva kune wand kuti uwane akasiyana edhita sarudzo, senge kuratidzwa, kupenya, kukwirisa uye kusiyanisa, pakati pezvimwe.
Kururamisa mafoto ako: Unogona kukurumidza uye nyore kutwasanudza mafoto ako. Kuti uite kudaro, vhura Mapikicha, sarudza mufananidzo waunoda kudzvara wodzvanya 'edit' mukona yekurudyi. Kubva pano, sarudza chirimwa chiri pazasi.
Tsvaga maarubhamu emifananidzo: Enda kuApps app uye wodzvanya pane girazi rekukudza mukona yepasi kurudyi. Mazano ekukurumidza anosanganisira kupfupisa mibairo yemifananidzo yako neGore Rimwe Rapfuura uye Marwendo, semuenzaniso. Nekudaro, iwe unogona kunyora akawanda ekutsvaga kwakasiyana semazita enzvimbo, vanhu kana mwedzi. Kana musanganiswa.
Bvunza Siri kuti akutorere mufananidzo: Siri inogona kutsvaga mafoto ako zvichienderana neruzivo rwavo uye maitiro. Mubvunze kuti atsvage mufananidzo chaiwo kubva 14 Chikunguru 2015, semuenzaniso, uye anongoita izvozvo. Amazeballs.
Mapikicha aunofarira: Kana uine mapikicha aunoda kumaka kuti uratidze vamwe nekukurumidza pane kuatsvaga kana kuapuruzira unogona kuafarira pane kudaro. Kuti uite izvi, ingotsvaga mufananidzo waunoda kufarira uye tinya bhatani remoyo pazasi pemufananidzo. Kuti uvawane nekukasira paunopinda muApps app, tinya pane iyo Albums icon pazasi, wobva wasarudza iyo Favorites albhamu.
Zvirinani kuona Zvakagovaniswa: Shandura iyo iPhone kana iPad padivi. Zvinotaridzika zvakanaka.
Nekukurumidza kuwana mufananidzo muMakore: Enda kune Photos app uye tinya pa 'Makore' mukona yezasi kuruboshwe. Iwe unozogona kuona makore ese awakatora mafoto mukati.
Ona kwawakatora mufananidzo: Muchikamu cheAlbum cheapp, tora pa'Nzvimbo' album. Pano unowana ese enzvimbo dzawakatora mafoto uye kuti ndeapi mapikicha aive munzvimbo ipi yenyika. Zooming inopa dzimwe nzvimbo dzakanangana, uchibaya 'Grid' inonyora nzvimbo mune iwo maonero.
Viga mufananidzo: Tsvaga iyo foto yaunoda kuvanza kubva kuMapikicha, Kuunganidzwa uye Makore, uye tinya pane yekugovana icon pazasi kuruboshwe. Iwe unogona ipapo kupenengura pasi sarudzo kusvika wawana 'Viga'. Iyo foto icharamba iripo kana iwe ukananga kuAlbum uye wobva wakanda pasi kune Yakavanzwa pasi peMamwe Albums pazasi.
Batidza iCloud Photo Library: Kuti ubatidze iyo iCloud Photo Library ficha zvinoreva kuti mafoto ako ese anongoiswa otomatiki uye kutsigirwa kuICloud enda kuSettings> Mapikicha uye wobva wachinja iyo iCloud Photo Library sarudzo.
Tora Mufananidzo Uripo: Yako iPhone kamera inogona kutora 1.5 masekondi pamberi uye 1.5 masekondi mushure memufananidzo kuitira kutora 'Live Photo' ine pfungwa yekufamba. Kuti utore Live Photo kubva kuCamera app, dzvanya bhatani reLive Photo riri mukona yekurudyi (rinoratidzika seti yemhete dzinoparadzana) kuti uibatidze, wobva wabaya bhatani rekuvhara.
Ona Mifananidzo Yepamoyo: Kana uchinge watora Live Photo, unogona kuiona muApps app pafoni yako. Vhura mufananidzo, wobva wadzvanya pamufananidzo kuti uritambe.
Gadzira nguva yekufamba: Kumisikidzwa muapp yekamera kunoita kuti iwe ugadzire vhidhiyo yekufamba kwenguva pasina kana kumboedza. Ingo swipe padivi muapp yekamera kuratidza iyo Time-Lapse mode. Kana uchinge wagadzirisa zvauri kuenda kufirimu dzvanya rekodhi bhatani. Iwe unofanirwa kuita firimu kwemasekonzi makumi matatu kuti uone mhedzisiro.
Rekodha vhidhiyo pa60 fps: Iine chero iPhone nyowani pane iPhone 6 uye 6 Plus, Apple inokupa iwe mukana wekurekodha 1080p pa60fps asi inodzima nekusarudzika. Kuibatidza enda kuZvirongwa> Kamera> Rekodha Vhidhiyo wobva wasarudza iyo '1080p pa60fps' sarudzo.
Rekodha vhidhiyo ye4K: Mamwe matsva emhando dze iPhone anotendera iwe kupfura vhidhiyo pa4K resolution. Enda kune imwechete sarudzo sepamusoro, asi sarudza '4K pa60fps'.
Shandura kumhanya kweSlo-Mo: Itsva iPhones inobvumidza iwe kurekodha muSlo-Mo modhi, kuti uchinje kumhanya, enda kuZvirongwa> Kamera> Rekodha Slo-mo.
AE/AF Kiya: Kuti uchinje kuratidzwa kana kutarisisa kwepfuti yako, tinya chero pahwindo uye inoshanduka ipapo ipapo. Kuti uvhare kuratidzwa uku kana kutarisa (yakanakira panoramas) dzvanya uye ubate pachiratidziri kusvika bhokisi rekona 'ravharika' - uchaona AE/AF Lock tag ichionekwa kumusoro kwechidzitiro.
Kuchinja kuratidzwa pane nhunzi: Kana uchinge wawana yako yekutarisisa (iyo hombe yeyero sikweya) muKamera app, tinya pane diki zuva icon uye swipe kumusoro kana pasi kuti uchinje kuratidzwa. Kumusoro kuti zvijeke, pasi kuti zvisvibe.
Activate Timer mode: MuCamera app pane icon inoita senge stopwatch. Iwe unozofanirwa kubaya museve uri pamusoro pechiratidziro kuti uone sarudzo. Kana wangoiwana, ibate, wobva wasarudza kuti unoda here 3 sekondi kana gumi yechipiri timer.
Burst Mode: Vashandisi vanogona kutora mafoto muBurst modhi nekubata chigunwe chavo pavhavha kana pavhoriyamu kiyi kuti vatore kuputika kwemifananidzo sezvo chiitiko chinoitika. Kana uchinge watora Burst yemifananidzo unogona kusarudza yako yaunofarira (s). Tinya pane iyo gallery icon pazasi pecamera app yako, uye tinya 'sarudza'. Tinya pamapikicha aunoda, wobva warova 'Chengetedza X chete favourites' kuti uchengetedze chete iwo awakasarudza.
Kurumidza kutanga kurekodha vhidhiyo: Unogona kukurumidza kutanga kurekodha vhidhiyo nekutsvaira ipapo pabhatani rekuvhara muapp kamera.
Sarudza mafoto akawanda zviri nyore: Mune yako Mapikicha app, mualbum kana muunganidzwa, dzvanya 'Sarudza' uye swipe chigunwe chako pahwindo kuti usarudze mafoto akawanda kamwechete.
Buda mufananidzo wekutarisa: Paunenge uchitsvaga mapikicha ako muApps app, unogona kukudza foto mugidhi kuti uione izere skrini, asi iwe unogona zvakare kutsvaira pasi pakutarisa kuti uikande kure uye wodzokera kune grid.
iPhone Notes mazano
Kurumidza kugadzira chinyorwa: Simba kudzvanya pane Notes app icon uye sarudza 'New Checklist' uye wobva watanga kugadzira yako yekutarisa nekukurumidza.
Nzira yekugovera uye yekudyidzana pane manotsi: Pane chiratidzo chekugovana mukati meManotsi chinoita senge silhouette yemunhu ari mudenderedzwa uye '+' icon padivi payo. Tinya pamadonhwe matatu ari mudenderedzwa kumusoro kurudyi kwechinyorwa, uye tinya pakanzi 'Goverana chinyorwa' kubva pane zvingasarudzwa. Unogona kuwedzera vanobatika vanogona kuona kana kuita shanduko munguva chaiyo.
Kubatidza mapassword muManotsi: Kuti uchengetedze maNotsi, enda kuZvirongwa> Manotsi> Pasiwedhi. Pano iwe unogona kuseta password yakasarudzika kune ako ese manotsi. Unogona kugonesa Touch ID futi.
Kana uchinge washandura chimiro iwe unofanirwa kugonesa wega password kukiya paNoti pachayo. Kuti uite izvi enda kuChinyorwa chiri mubvunzo, uye wodzvanya madotsi matatu ari mudenderedzwa kumusoro kurudyi kwekrini rako. Iwe unozofanirwa kubaya pane 'Lock' icon. Iwe unozofanirwa kuisa password yako kuti uvhare kanoti uye wodzvanya OK. Nguva inotevera paunoiwana iwe uchada password.
Sketch in Notes: Vhura iyo Notes app, dzvanya pane Nyowani nyowani mukona yezasi yekurudyi uye wobva wabaya peni mudenderedzwa kuti ugadzire sketch nyowani kana chinyorwa chakanyorwa nemaoko. Iwe unogona ipapo kunyora kure kusvika moyo wako wagutsikana.
Sevha zvakanamirwa kuZvinyorwa: Iyo system-wide Share bhatani inopa rutsigiro rweManotsi. Saka kana uri muSafari, semuenzaniso, dzvanya bhatani rekugovera kuchengetedza zvakanamirwa, senge chinongedzo kana gwaro, kune nyowani kana iripo noti.
iPhone Mail mazano
Maitiro ekutarisa maemail asina kuverengwa muMail: Enda kune chero yako inbox muMeseji app uye tinya diki denderedzwa icon ine mabhawa matatu mairi ichidzikira muhukuru pazasi kuruboshwe rwechidzitiro chako. Ikozvino ichakuratidza iwe chete mameseji ako asina kuverenga.
Maitiro ekupindura kune chaiyo email mune yakarukwa meseji: Pane yakarongedzerwa Email chimiro muIOS Email iyo inokutendera iwe kuti upindure kune mameseji mukati meshinda kwete ichangoburwa. Enda kune tambo yekukurukurirana wobva watsvaira kuruboshwe pane yega meseji kuratidza bhatani rekupindura, bhatani remureza uye bhatani rekudzima.
Maitiro ekuve nemaemail akawanda paunenge uchienda kamwechete: Iwe unogona kuva nemaemail akawanda paunenge uchienda kamwechete, zvinobatsira kana uri pakati pekupindura mumwe munhu uye wozotumira email nekukurumidza pakati.
Pane email yakavhurika iri kunyorwa dhonza pasi kubva pamutsetse wenyaya kuti utore iyo email. Unogona kuramba uchiita izvi. Paunenge uchida kuwana imwe yeaya maemail, kana kuona zvawavhura, dhonza iyo iri pamusoro pasi mberi uye iwe unowana maonero emaemail ese auri kushanda nawo.
Maka sekuverengwa: Muinbox yako tsvaira kubva kuruboshwe kuenda kurudyi kuratidza 'Verenga' icon. Kana iri nhaurirano unozofanirwa kuita izvi chero nguva paine mameseji asina kuverenga.
Zvimwe, Mureza, Marara: Kutsvaira kubva kurudyi kuenda kuruboshwe kunoratidza zviito zvinokurumidza kukurega uite zvinhu zvakati wandei. Zvimwe zvinounza imwe yechipiri menyu yekukutendera kuti upindure, kuendesa mberi, mureza, kumaka seusina kuverengwa, enda kune zvisina kufanira, kana kukuzivisa nezveremangwana mameseji munhaurirano iyi nepo Mureza nemarara zvichikutendera kuti uite izvozvo.
Kubvisa nekukurumidza (marara): Swipe kuruboshwe pane chero email mubhokisi rako, uye ramba uchitsvaira kudzamara waita iyo nzira yese pahwindo.
Kuchinja sarudzo dze swipe: Iwe unogona zvakare kushandura izvo zvinoitika kana iwe uchitsvaira kuruboshwe kana kurudyi mumaSettings. Enda Zvirongwa> Tsamba> Swipe Sarudzo wobva waisa yako Swipe Kuruboshwe kuraira uye yako Swipe Kurudyi kuraira. Sarudzo dzakaganhurirwa, asi chimwe chinhu.
Maitiro ekuwedzera kudzima uye kuchinja swipe sarudzo muMail neGmail pa iPhone
Mhinduro zviziviso: Kana iwe wakamirira chaiyo mhinduro kubva kune email uye usingade kuramba uchitarisa foni yako maminetsi maviri ega ega, unogona kusarudza kuti mudziyo wako ukuzivise. Mune chero meseji yawakagamuchira, tinya pane museve icon pazasi pechidzitiro uye wobva wasarudza Ndizivise kubva pane zvingasarudzwa. Simbisa sarudzo yako uye pavanokupindura unozoziva nezvazvo.
Kupfuura Nguva Zone: Time Zone Override kana yabatidzwa, inokuita kuti ugare uchiratidza chiitiko data uye nguva munzvimbo yakasarudzwa yenguva. Kana yadzimwa, zviitiko zvicharatidza zvinoenderana nenguva yenzvimbo yako yazvino. Kana izvo zvichiita sechimwe chinhu chaunoda enda kuZvirongwa> Karenda> Nguva Yekupfuura Kupfuura uye bvisa.
Gadzira bhuku rako rekufonera: Kana iwe ukawana tsamba kubva kune mumwe munhu uye iye aine siginicha, Apple inoverenga iyo ruzivo uye inokubvunza iwe kana iwe uchida kuiwedzera kune waunosangana naye. Kana iwe usingade, unogona kusarudza kufuratira, asi kana uchidaro, dzvanya pakanzi Wedzera kune Mazita bhatani kumusoro kwechidzitiro.
Search: Dhonza muinbox kuti uratidze bhokisi rekutsvaga. Iwe unogona ikozvino kutsvaga inbox yako yese yeizwi kiyi kwete kungoenda, Kubva, Chinyorwa. Unogonawo kuganhurira kutsvaga kwako kumabhokisi etsamba Ese kana bhokisi retsamba rauri mariri. Uyezve unogona kugumira kumatambo ehurukuro.
Maka zvese sekuverengwa: Unogona kumaka zvese sekuverengerwa muMail. Yay. Mubhokisi retsamba, kana kuti inbox yakasanganiswa, unongobaya 'Edit' kumusoro kurudyi, wobva wadzvanya 'Sarudza Zvese' kumusoro kuruboshwe, uchiteverwa na'Maka' mukona yezasi kuruboshwe uye sarudza sarudza 'Maka Sezvo Read' kubva. iyo pop-up menyu uye meseji yako yese inofanirwa kumakwa sekuverengwa.
Shandisa Mail Drop pane iOS: Mail Drop yakaunzwa muMac OS X kuti ikuregedze nyore kutumira maemail mahombe ekubatanidza kuburikidza neICloud. Icho chinhu chimwe chete chinowanikwa muIOS Mail app, ichikutendera kuti ubatanidze faira hombe (5GB kusvika 20GB). Paunobatanidza faira, uchaona hwindo repopup ine sarudzo yekushandisa Mail Drop. Simples.
iPhone Keyboard mazano
Swipe kuti unyore: Kune avo vane inoenderana iOS 13 kana gare gare mudziyo, unogona swipe kutaipa. Ingo chengeta chigunwe chako kana chigunwe pa keyboard uye swipe kubva pane rimwe bhii kuenda kune rinotevera. Kana wapedza izwi, simudza chigunwe chako kana chigunwe wobva wadzorera pakiibhodhi kune izwi rinotevera.
Enda neruoko rumwe: Iyo QuickType keyboard inokuita kuti unyore neruoko rumwe, iyo yakanaka pamidziyo mikuru. Dzvanya uye bata diki emoji icon uye sarudza iyo yekuruboshwe kana yekurudyi kiibhodhi. Iyo inokwenya kiibhodhi uye ichiiendesa kune rimwe divi rechiratidziro. Dzokera kuhukuru hwakazara nekudzvanya museve mudiki.
Dzima neruoko rumwe: Kana iwe usingambode iyo sarudzo yekuenda neruoko rumwe, enda kuSettings> General> Keyboard uye shandura iyo 'One-ruoko keyboard' sarudzo yekudzima.
Shandisa keyboard yako se trackpad: Iwe unogona kushandisa iyo keyboard nzvimbo seye trackpad kufambisa iyo cursor pascreen. Inoshanda pese pane mameseji ekuisa, uye inokuchengetedza iwe kuti uedze uye ubate iyo chaiyo nzvimbo yaunoda kutanga kugadzirisa. Ingomanikidza kudzvanya spacebar uye fambisa chituru ichitenderedza.
Kusarudza yako Emoji ruvara: Kuti uwane imwe emoji ine matoni eganda, enda kune emoji kiibhodhi mune chero app uye dzvanya kwenguva refu emoji yaunoda kushandisa. Kana iine dzimwe sarudzo dzavacharatidza.
Kuwedzera echitatu-bato keyboards: Isa iyo app (SwiftKey kana Gboard yakanaka) uye tevera mirairo iri muapp. Pane imwe nguva ichakukumbira kuti uende kuSettings> General> Keyboard> Keyboards uye wedzera yechitatu-bato keyboard.
Kuwana mamwe makiyibhodhi kupfuura Emoji: Kana iwe uine anopfuura matatu makiyibhodhi akaiswa, iyo keyboard inoratidza chiratidzo chepasirese padivi pe spacebar. Mune chero app ine kiibhodhi tepi pane iyo globe icon uye zvakare kuratidza inotevera keyboard yawakaisa.
Dzima maanimation ekibhodhi: Apple's keyboard ine pop-up character animation inoshanda semhinduro kana iwe uchibaya makiyi. Unogona kuidzima nekuenda kuSettings> General> Keyboard> toggling off Character Preview.
Mapfupi ekutsiva mavara: Imwe yeiOS' inonyanya kubatsira kiibhodhi mhinduro kugadzira mapfupi mapfupi anoshanduka kuita akazara mazwi kana mitsara. Enda kuSettings> General> Keyboard> Text Replacement. Tinoona zvichibatsira kuva neyekero inongozvizadza yega pese patinotadza kuperetera "kero", tichiwedzera mamwe "ma" pakupera.
Apple Mepu mazano
Maitiro ekuseta yakasarudzika mhando yekufambisa muApple Mepu: Kana iwe ukaona uchingoshandisa Apple Mepu paunenge uchifamba, unogona kuseta yakasarudzika mhando yekufambisa kuti ive iyoyo. Kuti uchinje pakati peKutyaira, Kufamba, uye Kutakura Kwevanhu, enda kuZvirongwa> Mepu uye sarudza yaunoda.
Isu ARKit muFlyOver: Makore mashoma apfuura, Apple yakagadzira yayo Mepu app, yakazara neFlyover; chaiwo 3D shanduro dzemaguta makuru. Zvinogoneka kutarisa kwakatenderedza maguta e3D nekungofambisa yako iPhone nekuda kwechinhu ichi. Tsvaga guta guru - seLondon kana New York - wobva wadzvanya "FlyOver" sarudzo. Ipapo zvese zvaunoda kuita kufambisa mudziyo wako wotarisa kutenderera neguta.
Shandisa mepu dzemukati: Iwe zvino unogona kushandisa mepu yemukati kuti uwane nzira yako yakatenderedza zvitoro zvikuru kana nzvimbo dzekutengera. Izvo zvishoma, asi unogona kuzviedza muPhiladelphia International Airport uye Mineta San Jose International Airport. Kuti ushandise mamepu emukati, ingotsvaga nzvimbo inotsigirwa uye pinch-to-zoom mukati kusvika nzvimbo dzekunze dzaita grey. Iye zvino unogona kuona mukati meimba.
Famba pakati pezvivakwa zvekuvaka pamepu dzemukati: Paunenge wava mukati memepu yekuvaka, iwe uchaona nhamba iri kurudyi rwechidzitiro. Tora iyo, uye wozosarudza nhanho yepasi.
Apple Music mazano
Maitiro ekuwana raibhurari yako yese yemimhanzi: Kuti uone nziyo dzese, maalbum, uye nziyo dzekutamba dzawakawedzera kubva kuApple Music catalogue, pamwe nechero mimhanzi yawakatenga kubva iTunes, kusanganisira maCD awakabvarura, ingo tora iyo Raibhurari tabhu kubva kuapp menyu bar pazasi.
Maitiro ekugadziridza zvikamu zveLibhurari yako: Kuti uchenese raibhurari yako uye tsanangura kuti ndedzipi zvikamu zvaungade kuona uchingotarisa, zvakaita semhando, maartist, kana rwiyo, dzvanya bhatani re'Edit' riri kumusoro kumusoro kurudyi kweLibrary skrini, wobva wabatidza/kudzima zvido.
Mawaniro emimhanzi yako yakadhawunirodwa: Kana iwe uchingoda kuona mimhanzi iri pamudziyo wako, tora iyo Raibhurari tabhu kubva kuapp menyu bar pazasi, wobva wadzvanya Mimhanzi Yakarodzwa.
Maitiro ekugadzira mutsva wekutamba: Kuenda parwendo uye unoda kugadzira playlist? Easy. Tinya iyo Raibhurari tebhu kubva kuapp's menu bar pazasi, wobva wadzvanya Playlists, uye sarudza Nyowani Playlist. Kubva ipapo, unogona kuwedzera zita rekutamba, tsananguro, mimhanzi, uye toggle on/off kana uchida playlist yeruzhinji.
Maitiro ekutsvaga Apple's curated playlists: Iyo 'Teerera Izvozvi' tebhu inowanikwa mubhara remenu pazasi inzvimbo yaunogona kuenda kuti uwane mazano emimhanzi akasarudzwa nemaoko neApple Music timu. Mazano anosanganisira musanganiswa weanofarira, zuva nezuva playlists, maartist spotlights, uye zvitsva zvinoburitswa, zvese zvinonangana newe uye zvinoenderana nezvaunofarira mimhanzi.
Maitiro ekutsvaga muApple Music: Tinya iyo Tsvaga icon mubhara remenu pazasi kuti uwane nzvimbo yakatsaurirwa yekutsvaga, kwaunogona kunyora-mazita evatambi, mazita ealbum, nezvimwe.
Nzira yekuwana sei machati emimhanzi yepamusoro: Enda kuBhurawuza tebhu mubhara remenu pazasi, wobva wadzvanya 'Chati' kuti uone runyoro runogara rwakagadziridzwa rwenziyo dzinonyanya kufarirwa paApple Music.
Maitiro ekutsvaga machati emimhanzi epamusoro nemhando: Nekumisikidza, chikamu cheChati muBhurawuza tebhu inokuratidza marudzi ese. Asi unogona kusarudza rudzi rwakati, seBlues, nekudzvanya bhatani re'All Genres' kumusoro kurudyi nekusarudza rudzi rwako kubva pane rondedzero inoonekwa.
Mawaniro emavhidhiyo: Apple Music haisi yemimhanzi chete. Izvo zvakare nezve mavhidhiyo emimhanzi uye zvimwe zvemukati zvevhidhiyo. Enda kuBhurawuza tebhu mubhara remenu pazasi, wobva wakanda pasi ku'Mumhanzi Vhidhiyo' kuti uone mavhidhiyo matsva paApple Music uye epamusoro mavhidhiyo emimhanzi.
Mawaniro eMumhanzi 1 nhepfenyuro: Apple Music inopa 24/7 live-streaming redhiyo inonzi Music 1 - yaimbove Beats 1. Kuti uiwane, dzvanya tebhu reRadio mubhara remenu pazasi, wobva wabaya Music 1 thumbnail.
Mawaniro enhepfenyuro Kunze kweMumhanzi 1, Apple Music inopa zviteshi zvinoenderana nemhando uye akasiyana madingindira. Unogona kuvawana pasi peRadio tebhu mubhari yemenyu pazasi.
Nzira yekugovera album Unoda kugovera album kuburikidza ne Twitter, Facebook, kana kupi zvako? Tinya pane chero albhamu, wobva wasarudza bhatani rine (…) madotsi matatu kumusoro. Kubva ipapo, tora Govera Album uye sarudza maitiro aungade kuigovera.
Maitiro ekuwedzera albhamu kune playlist: Unogona kuwedzera album yese kune itsva kana yekare playlist. Ingobaya paalbum, wobva wasarudza bhatani rine (…) madotsi matatu kumusoro. Kubva ipapo, tora 'Wedzera kune Playlist', wobva wasarudza kuti ndeipi playlist (yekare kana nyowani) yaunoda kuwedzera kwairi.
Maitiro ekudhaunirodha albhamu kuLibhurari yako yekuteerera pasina Indaneti: Tinya pane iyo albhamu, uye wobva wasarudza Wedzera kuraibhurari. Kana wapedza izvozvo, unogona kubaya gore nemuseve wakanongedza pasi kuti utore pasi.
Nzira yekuda album: Unogona kuudza Apple Music kana iwe uchida albhamu kuitira kuti igone kugadzirisa mimhanzi mazano kwauri. Tinya pane chero albhamu, wobva wasarudza bhatani rine (…) madotsi matatu. Kubva ipapo, baya Rudo.
Maitiro ekugadzira chiteshi kubva parwiyo: Tinya pane chero rwiyo, uyezve kubva mumhanzi zvinodzora menyu (tinya pazasi kuti iwedzere kuita yakazara skrini kadhi) sarudza bhatani rine (...) madotsi matatu mukona yepamusoro. Kubva ipapo, tora Gadzira Chiteshi. Izvi zvinogadzira nhepfenyuro yakavakirwa parwiyo rwacho.
Nzira yekugovera sei rwiyo: Unoda kugovera album kuburikidza ne Twitter, Facebook, kana kupi zvako? Tinya pane chero rwiyo, uyezve kubva mumhanzi zvinodzora menyu (tinya pazasi kuti iwedzere kuita yakazara skrini kadhi) sarudza bhatani rine (...) madotsi matatu mukona yepamusoro. Kubva ipapo, tinya Govera, wobva wadzvanya kuti unoda kugovera sei.
Maitiro ekuwedzera rwiyo kune playlist: Tinya pane chero rwiyo, uyezve kubva mumhanzi zvinodzora menyu (tinya pazasi kuti iwedzere kuita yakazara skrini kadhi) sarudza bhatani rine (...) madotsi matatu mukona yepamusoro. Kubva ipapo, tora Wedzera kune Playlist, uye wosarudza kuti ndeipi playlist (yekare kana nyowani).
Maitiro ekudhaunirodha rwiyo kuLibhurari yako kuti uteerere pasina Indaneti: Tinya pane '+' chiratidzo padyo nechero rwiyo kuti uwedzere kuraibhurari yako. Unogona kubva wabaya gore nemuseve kuti utore rwiyo.
Kuda rwiyo: Unogona kuudza Apple Music kana iwe uchida rwiyo kuitira kuti rugone kugadziridza mimhanzi mazano kwauri. Tinya pane chero rwiyo, wobva waibaya nechepazasi kuti iwedzere kuita yakazara skrini kadhi) sarudza bhatani rine (…) madotsi matatu mukona yepamusoro. Kubva ipapo, baya Rudo.
Maitiro ekuona mazwi erwiyo: Haukwanise kuziva zviri kutaurwa nemuimbi murwiyo? Tarisa uone mazwi ari muApple Music. Tinya pane chero rwiyo, wobva wadzvanya pazasi kuita kuti zvigadziriso zviwedzere kuita yakazara skrini kadhi. Mazwi emazwi anobva abuda otomatiki.
Chinja audio source yerwiyo: Unoda kuchinja kubva ku iPhone yako kuenda kune yakabatana mutauri? Tinya pane chero rwiyo, uye wozosarudza bhatani remuseve rine masaisai eredhiyo (inogara pazasi pevhoriyamu inotsvedza). Kubva ipapo, sarudza yako audio source.
Govera muimbi Kufanana nenziyo uye maalbum, unogona kugovera muimbi neshamwari kuburikidza nesocial network uye mameseji mameseji. Ingobaya peji remumwe muimbi (tsvaga muimbi, wobva wadzvanya zita rake kuti uwane peji, nezvimwewo), wobva wabaya bhatani rine (…) madotsi matatu padivi pezita ravo, wosarudza Goverana Artist. Kubva ipapo, sarudza kuti unoda kugovera sei.
iPhone pamubhedha / usakanganisa matipi
Maitiro ekuseta alarm zvichienderana nekuti iwe unorara nguvai: Iyo Clock app inogona kukuyeuchidza kuti uende kunorara uye wozomutsa iwe maawa masere gare gare semuenzaniso. Iwe unogona kuseta Chirongwa cheKurara muHutano app, kana iwe unogona kuseta Yekurara Kutarisisa nekutsvaira kumusoro kubva paImba Screen yako, kubaya paFocus tile uye kuseta Kurara Kwekutarisa kuti usangane nezvido zvako.
Maitiro ekuronga Night Shift modhi: Night Shift inogona kushandura otomatiki mavara echiratidziro chako kune inodziya yekupedzisira yeruvara rwemavara mushure merima. Haisi kubatidzwa nekukasira saka kuibatidza, enda kuZvirongwa> Kuratidza & Kupenya> Night Shift. Pano unoisa paunoda kuti irongedzwe kuti ishande kana kuti 'Igonese nemaoko kusvika mangwana'. Iwe unogona zvakare kuseta kudziya kwechiratidziro kubva 'Kusadziya' kuenda ku'More warm'.
Ronga Usakanganisa kana Kurara Kutarisa: Kana iwe uchida kuve nechokwadi chekuti mameseji eemail asina kurongeka uye ziviso dzeFacebook hadzikumutse husiku, enda kuZvirongwa> Tarisa> Gadzira Kurara kana Kusavhiringidza marongero kuti akwane maitiro ako.
Gadzirisa ScreenTime: Iwe unogona kuseta miganhu pakushandiswa kweapp pamwe nekuona kuti inguvai yawakashandisa mune mamwe maapplication. Kuti uwane zvakawanda pane izvi tarisa yedu yakazara gwara kune ScreenTime.
Shandura: Siri inogona kushandura mitauro mishoma kuenda kuAmerican English. Ingobvunza kuti 'Hesi Siri, unoti sei [chirevo pano] muchiGerman/Spanish/Italian/Japanese/Chinese."
Hey Siri: Kuti Siri ishande nekungoipopotera pane kudzvanya bhatani enda kuSettings> Siri & Search> Teerera kuti “Hey Siri”.
Dzima Proactive Assistant: Kana iwe usingade kuti Siri itaure maapplication, vanhu, nzvimbo, uye nezvimwe paunoshandisa Spotlight Search, unogona kugara uchidzima Siri Mazano. Vhura Zvirongwa> Siri uye Tsvaga. Pane Mazano kubva kuApple chikamu chaunogona kushandura akasiyana sarudzo kana kudzima.
Udza Siri kuti ayeuke zvaunoona pachiratidziri: Siri inogona kuseta zviyeuchidzo. Unoziva izvi. Asi anogona kukuyeuchidza nezve chero chinoratidzwa pachiratidziro chemudziyo wako - ingave webhusaiti kana chinyorwa. Ingoti "Siri, ndiyeuchidze nezve izvi," uye iye achatarisa peji uye owedzera zvinoenderana neako Zviyeuchidzo app.
Bvunza Siri kuti akutorere mufananidzo: Siri inogona kutsvaga mafoto ako zvichienderana neruzivo rwavo uye maitiro. Mubvunze kuti atsvage mufananidzo chaiwo kubva 14 Chikunguru 2015, semuenzaniso, uye anongoita izvozvo.
Nyarara Siri: Dzimwe nguva Siri anongobatsira kana asiri kutaura. Nechinofadza, marongero anonzi Voice Feedback (Settings> Siri & Search> Siri Responses) inoita kuti usarudze paanogona kushandisa izwi rake. Unogona kushandura marongero kuti agare akabatidzwa, Kana Silent Mode Yadzima uye Chete ne "Hei Siri".
Misa mawebhusaiti achikutevera: Enda kune Zvirongwa> Safari uye wobva wachinja iyo 'Prevent Cross-Site Tracking' chinja kune chinzvimbo.
Fambisa kero tab kudzokera kumusoro: Enda kune Zvirongwa> Safari> Sarudza iyo 'Single Tab' sarudzo yekudzosera iyo Safari kero tebhu kumashure kumusoro.
Svika mapassword akachengetwa: Kutenda kuCloud, Safari inokwanisa kuchengetedza password yako pamidziyo yako yese. Enda kune Zvirongwa> Mapassword> Pinda uchishandisa yako Touch ID scanner. Pano iwe unogona kuona ese mapassword akachengetwa, uye woatonga.
Tsvaga paPeji muSafari: Kuti uwane zvinyorwa muSafari peji, rova ​​​​bhatani reGovera pane peji kuti uone Tsvaga paPeji sarudzo (inotarisana nepop-up pamusoro pekhibhodi).
DuckDuckGo: Kana iwe uchida kuseta DuckDuckGo seyako yekutsvagisa injini pamusoro peGoogle, Yahoo, kana Bing, enda kuSettings> Safari> Search Engine uye sarudza yakavanzika-inoshamwaridzika yekutsvaga injini seyekutanga.
Mawebhusaiti ekukurudzira otomatiki: Kufanana neSafari padesktop, unogona kuve neiyo iPhone kana iPad Safari inokurudzira yakakurudzirwa mhinduro dzekutsvaga paunenge uchinyora. Iripo seyakagadzika asi kana usingadi, enda kuZvirongwa> Safari> Mazano Enjini Yekutsvagisa uye shandura chimiro chacho.
Auto kupa mazano maapuro: Saizvozvowo sezvaunonyora mumazita eapp akakurumbira muSafari yekutsvaga URL bhokisi, Apple inoedza uye kuenzanisa izvo nemaapplication auinawo kana aungade. Iripo seyakagadzika, asi kana iwe uchida kudzima kana wadzima enda kuSettings> Safari> Safari Mazano.
Kuwana iyo webhusaiti link nekukurumidza: Zvirongwa> Safari> Kurumidza Kutsvaga Webhusaiti inozoona kuti Safari inopa mawebhusaiti machisi kana kwete kwauri.
Kuita kuti mawebhusaiti atakure nekukurumidza kana kuchengetedza data rako: Safari inofanorodha yekutanga hit yemhedzisiro yekutsvaga kuti kurodha sarudzo yako iite sekukurumidza. Izvo zvakaderera ndezvekuti izvi zvinogona kushandisa kumusoro data. Kana iwe uchida kuidzima enda kuSettings> Safari> Preload Top Hit woidzima.
Skena kadhi rako rechikwereti: Pane kuti unyore zvese zvako zvese, unogona kushandisa kamera kuongorora kadhi rako rechikwereti. Kana zvasvika pakuisa ruzivo rwekadhi rechikwereti kana dzvanya kuti uzadze otomatiki kana uri kutoshandisa chinhu ichocho neKeychain, kana kuidzvanya uye wozosarudza Shandisa Kamera pane inotevera menyu yaunowana.
Swipe kumberi nekumashure: Kutsvaira kubva pachiratidziro kuenda kuchiratidziro kubva kuruboshwe kwechidzitiro kunodzokera kuburikidza nenhoroondo yako yekubhurawuza uchitsvaira kubva kurudyi rweSafari kunoenda kumberi kuburikidza nenhoroondo yako yekubhurawuza.
Vhara ese Safari tabs: Tinoda zano iri. Kuvhara ese akavhurika Safari tabo, vhura Safari wodzvanya uye ubate mativi maviri mukona yekurudyi. Iwe unozoona sarudzo yeku 'Vhara Zvese [nhamba yematabo akavhurika] Tabs'.
Handoff uye Kuenderera mberi mazano
Kugonesa Handoff pakati pemidziyo yeIOS: Enda kuna General> AirPlay & Handoff wobva wachinja bhokisi reHandoff.
Kuwana Handoff apps: Pa Lock Screen tinya chiratidzo cheapp mukona yezasi kuruboshwe.
Kubvumira mameseji eSMS paMac yako: Kuti uite izvi unofanirwa kugonesa chimiro pane yako iPhone. Ita shuwa kuti urikumhanyisa iOS 8.1 kana gare gare wobva waenda kuSettings> Messages> Text Message Forwarding. Tsvaga Mac yako kana iPad yaunoda kubvumidza kupinda uye batanidza zvishandiso zviviri izvi nekodhi yekuchengetedza. Iwe zvino wave kukwanisa kuona uye kutumira mameseji mameseji kuburikidza nedesktop.
Batidza iCloud Drive: Enda kuSettings, tora pazita rako / ID kumusoro uye enda kuICloud. Pano iwe unogona kudzora kuti ndeapi maapplication anogona kuwana yako iCloud Drive uye kuti vangashandisa kana kusashandisa Cellular / Mobile Data.
Ronga Kuchengeta kwako: Enda kuSettings, ipapo zita rako/ID> iCloud> Manage Storage. Kubva pano unogona kuona kuti yakawanda sei yekuchengetedza yaunayo, yakawanda sei yawasara, uye sarudza kutenga zvimwe.
Kugovana Kwemhuri: Pane kuti uve neApple account yako paPhones nema iPads emhuri yako unogona kuseta Kugovera Kwemhuri kwevanhu vanosvika matanhatu. Enda kune Zvirongwa wobva wabaya zita/ID yako kumusoro uye sarudza iyo 'Kugovera Kwemhuri' sarudzo. Unogona verenga zvakawanda nezveKugovana Kwemhuri mune yedu yakaparadzana chimiro.
Chengetedza iCloud Keychain Access: Enda kune Zvirongwa, ipapo zita / ID yako kumusoro> iCloud> Keychain, uye woibatidza kana kuidzima.
Tumira nzvimbo yekupedzisira kuti uiwane kunyangwe foni yafa: Pane inotonhorera yakavanzika chimiro chinozotumira otomatiki iyo yekupedzisira inozivikanwa nzvimbo kuApple kana bhatiri rako rakaderera zvakanyanya. Kunyangwe bhatiri rikafa sekunge warasa foni kuseri kwesofa unogona kungoziva kuti yasvika kupi. Enda kune Zvirongwa, ipapo zita rako / ID kumusoro> Tinya pane Tsvaga Yangu> Tsvaga iPhone Yangu> Shandura pa'Tumira Nzvimbo Yekupedzisira'.
Svika iCloud Drive mafaera: Enda kuFiles app wobva wadzvanya 'Browse'. Pasi pechikamu che'Nzvimbo', tora pa'iCloud Drive'. Pano iwe uchaona ese magwaro uye mafaera akachengetwa muICloud Drive yako.
Apple Pay mazano
Gadzirisa mari yako: Kuti ikubatsire kumhanyisa nguva yako kune cashier unogona kufanogadzirira Apple Pay yako usati wasvika pakaunda. Kuti uite izvi enda muApple Wallet, sarudza kadhi raunoda kushandisa uye wobva wabata chigunwe chako paBata ID sensor. Kana wapedza une miniti yekushandisa mubhadharo wezvombo usati wadzima.
Maitiro ekushandisa Apple Pay pa iPhone SE
Rodha makadhi akawanda: Iko hakuna muganho kune huwandu hwemakadhi ebhangi Apple Pay inogona kubata saka ramba uchiaisa muWallet.
Maitiro ekuwana Apple Pay kubva kuKiya skrini: Kuti uwane Apple Pay paKiya skrini unogona kubaya kaviri bhatani reKumba. Kana iwe usingade chinhu ichi unogona kuchidzima nekuenda kuSettings> Wallet & Apple Pay uye nekudzima 'Kaviri-Click Bhatani Repamba'.
Maitiro ekubvumidza Apple Pay Payments paMac: Unogona kushandisa Apple Pay pane yako iPhone kusimbisa kubhadhara paMac iri pedyo. Kuti uone kuti izvi zvakabatidzwa enda kuZvirongwa> Wallet & Apple Pay wobatidza 'Bvumira Kubhadhara paMac'.
Maitiro ekushandura iyo default Apple Pay kadhi: Enda kune Zvirongwa> Wallet & Apple Pay uye sarudza iyo Default Kadhi yaunoda. Kana iwe uine kadhi rimwe chete rinobva rave iro rekutanga kadhi.
Maitiro ekuseta Express Travel Card: Zvinogoneka kuseta Express Yekufamba Kadhi kuti ugone kungobata yako iPhone uchipokana neino enderana kubhadhara terminal, seLondon Underground kana New York Metro, pasina kuivhura. Enda kuZvirongwa> Wallet & Apple Pay> Express Travel Card> Sarudza kadhi raunoda kubhadhara pakufamba kwako naro.
Maitiro ekuseta Express Yekufamba Kadhi paApple Pay kubhadhara nekukurumidza ne iPhone yako kana Apple Watch
Sarudza kadhi rekubhadhara reApple Pay: Paunenge uchibhadhara neApple Pay, unogona kukurumidza kusarudza kadhi ripi raunoda kushandisa nekungodzvanya kaviri bhatani repamba paunenge uri pachivharo chekukiya uye nekutsvaira kune kadhi raunoda kushandisa. Ichaunza makadhi ako ese pa iPhone yako.